ဒေါ်ခင်ကြည် ဖောင်ဒေးရှင်းမှ ရခိုင်ပြည်နယ် အတွင်း ဆောက်လုပ်လှူဒါန်းမည့် ကျေးလက်အိမ် နမူနာပ?? - Yangon Media Group
ဒေါ်ခင်ကြည် ဖောင်ဒေးရှင်းမှ ရခိုင်ပြည်နယ် အတွင်း ဆောက်လုပ်လှူဒါန်းမည့် ကျေးလက်အိမ် နမူနာပ??
ဒေါ်ခင်ကြည်ဖောင်ဒေးရှင်းမှ ရခိုင် ပြည်နယ်အတွင်း ဆောက်လုပ်လှူဒါန်းမည့် ကျေးလက်အိမ်ပုံစံနမူနာနှင့် ဝန်ကြီးဌာနအတွင်း ဖွင့်လှစ်ထားသည့် နေ့ကလေးထိန်း ကျောင်းတို့အား နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကသွားရောက် ကြည့်ရှုခဲ့ကြောင်းသိရသည်။ နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ် အောင်ဆန်းစုကြည်သည် ရခိုင်ပြည်နယ် မောင် တောမြို့နယ် ခုံတိုင်ကျေးရွာ၌ ဒေါ်ခင်ကြည် ဖောင်ဒေးရှင်းမှ ဆောက်လုပ်လှူဒါန်းမည့် ကျေးလက်အိမ်ပုံစံများကို နေပြည်တော်ရှိ လူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာန၌ အိမ်နမူနာပုံစံဖြင့် ဆောက်လုပ်ပြသထားသည်ကို ဒီဇင်ဘာ ၁၉ ရက် ညနေပိုင်းက သွားရောက်ကြည့်ရှုခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
အဆိုပါ ကျေးလက်အိမ်သည် အလျား ပေ ၄ဝ၊ အနံပေ ၆ဝ ခြံဝင်းအတွင်း တည် ဆောက်မည်ဖြစ်ကာ အဆောက်အအုံအကျယ်အဝန်းမှာ ၁၈ ပေနှင့် ၂၈ ပေရှိကာ သွပ်မိုး၊ ကွန်ကရစ် ကျောက်ပြားအကာနှင့်သစ်ခင်း အဆောက်အအုံအမျိုးအစားဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ အဆိုပါ အိမ်နမူနာပုံစံများနှင့်ပတ် သက်၍ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာဝင်း မြတ်အေး၊ ဒုတိယဝန်ကြီး ဦးစိုးအောင်နှင့် SEVEN KING Construction Co.,Ltd Managing Director ဦးမျိုးကိုကိုတို့က ကျေး လက်အိမ်ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ၊ ဒေသနှင့် ကိုက်ညီမှုအခြေအနေတို့နှင့် ပတ်သက်၍ ရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့ကြောင်းသိရသည်။
ထို့နောက် ဝန်ကြီးဌာနဝင်းအတွင်းဖွင့် လှစ်ထားသည့် ‘မေမေ့ရင်ခွင်’ နေ့ကလေးထိန်းဌာနသို့ သွားရောက်ပြီး သုံးနှစ်အောက်က လေးငယ်များအား အသက်အရွယ်အလိုက် ပြုစုစောင့်ရှောက်မှု အခြေအနေများကို ကြည့် ရှုစစ်ဆေးခဲ့ကြောင်းသိရသည်။ ထို့အပြင် နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင် ဆန်းစုကြည်သည် နေ့ကလေးထိန်းဌာနအတွင်းရှိ ကစားကွင်းငယ်သို့ရောက်ရှိပြီး ကလေးများ ဆော့ကစားနေမှုများကို ကြည်ရှုခဲ့သည်။ ‘မေမေ့ရင်ခွင်’ နေ့ကလေးထိန်းဌာနသည် နေပြည်တော်ရှိ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနများ၊ ပြည်ထောင်စုအဆင့်အဖွဲ့အစည်းများမှ နိုင်ငံဝန်ထမ်းများ၏ သားသမီးများအား ရုံးချိန်အတွင်း လက်ခံပြုစုစောင့်ရှောက်ပေး လျက်ရှိကြောင်းသိရသည်။
ကမ်းခြေတွင် မျောပါသော လှေများအတွင်း လူသေအလောင်း နှစ်လောင်းထက် မနည်း တွေ့ရှိ
၈၈၈၈ ပါတီ အမည်အား ကန့်ကွက်မှုများ ရှိပါက ဥပဒေ နည်းလမ်းအရ ဆောင်ရွက်သွားမည်ဟု ဦးကိုကိုကြီး ဆိ
ပါတီအမည်အသစ် ပြန်ရွေးနိုင်ရေးအတွက် တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်ကော်မတီများထံမှ အဆိုပြုချက??
ရန်ကုန်-မန္တလေး အမြန်လမ်း ဆောက်လုပ်ရေး ရှင်းလင်းဆောင် မီးလောင်
လှိုင်သာယာ – ဟင်္သာတ လမ်းပိုင်း RBE ရထားပြေးဆွဲမှု အရှုံးပေါ်သဖြင့် ရပ်ဆိုင်းခဲ့ရ ဟုဆို